Ioli ye-Castor yeenwele, isicelo. Ioli ye-Castor yeenwele, zokupheka zokupheka ekhaya.
Imihla yeenwele kunye neoli ye-castor
Ukuba ufuna i-remedy engabizi kodwa esebenzayo yokulungisa iinwele ezonakalisiweyo, ke qiniseka ukuba ubeke ingqalelo kwioli ye-castor. Ukusetyenziswa kwayo kuphephile ngokupheleleyo, kwaye inani leendlela zokusebenzisa iifayile usebenzisa ioli ye-castor ikuvumela ukuba ukhethe i-mask ukuphatha phantse zonke izifo zee-curls. Ngokumalunga neempawu ezintle zoboya ngeoli ye-castor kwaye ziya kuxutyushwa kwinqaku lethu.
Ioli ye-Castor yeenwele: ukusebenzisa kunye nesicelo
I-Castor iye yazinzisa ngokwesiqhelo njengononophelo lwezinwele. Kwaye konke ukubonga kwi-linoleic, i-ricinoleic, i-oleic, i-stearic kunye nezinye i-acids ezingenayo i-fatty acid acids, eziyiluncedo kakhulu kwiikhephe ezinempilo. Ukusetyenziswa rhoqo kweoli ye-castor kukuvumela ukuba uzalise iinwele kunye nezondlo kumgangatho weselula, uzinzima, uphumelele izikali, ubuyisele ukukhanya kwendalo kwaye ugcine umswakama ngaphakathi kwintonga. Ukongezelela ekuboneleleni ngenzuzo kwizinwele, ikhambi lenza ngcono ukujikeleza kwegazi kwesikhumba, kuphelisa iibhaktheriya, uphulukise amanxeba amancinci. Konke oku kuncedisa ekuveleni kwama-bulbhu amatsha, ukuyeka ukulahleka kweenwele kunye nokususwa kwezinto ezinqabileyo.
Kukho iindlela ezininzi zokufaka ioli ye-castor yeenwele. Ngokuqhelekileyo, ioli efudumele isetyenziswe njengemveliso ezizimeleyo kwi-scalp, kunye nobude obude bemida okanye kuphela kwiingcebiso zabo, kuxhomekeke kwingxaki ekhoyo. Faka isicelo seoli ye-castor kunye nokwakheka kweenwele zeenwele ngokudibanisa nezithako zemvelo, umzekelo, i-kefir, i-yolk, ioli okanye i-anyanisi ebalulekileyo.
I-castor esebenzayo kakhulu yeenwele zeenwele ekhaya
Isalathisi se-Castor ngokuchasene neziphelo
ioli ye-castor - 2 tbsp. l.
ioli yekakhukhunathi - 1 tbsp. l.
i-lavender i-oyile yomsindo - ama-3-5 ahla
I-melt ioli ecocekile yeconcoti kwindawo yokuhlambela amanzi.
Ukucwilisa ioli ye-castor. Ukwenza oku, faka ibhotile yeoli ye-castor kwisitya sokubilisa amanzi atshisayo imizuzu eyi-10 okanye ukufudumala kwindawo yokuhlambela amanzi.
Hlanganisa amafutha afudumele kwisitya.
Yongeza amaconsi ambalwa eoli ye-aroma kumxube uze udibanise kakuhle.
Faka isicelo kwimikhakha yee-curls uze ushiye imaski imizuzu engama-30-60. Kule meko, kuyinqweneleka ukugubungela intloko nge-cap yeshazi uze uyigubungele ithawula.
Emva kokuba ixesha lidlulile, hlambulula ngamanzi afudumele kunye ne-shampoo.
Umaskiti we-Castor we-dandruff
utywala - 10 gr.
ijusi ye-anyanisi - 1 tbsp. l.
Ukugcoba ioli ye-castor kwindawo yokuhlambela ngamanzi.
Thatha i-bulb encinci kwaye uyiphonye kwi-husk.
Gubha i-onion kwi-grater.
Faka i-gruel ephumela kwi-gauze uze udibanise ijusi.
Yongeza ijusi ye-anyanisi kwi-bhotela uze udibanise.
Dlulela kumxube otywala, ugxininise kwaye usetyenzise kwingcambu.
Yibambe i-remedy imizuzu engama-30. Emva koko veza ngamanzi asebenzayo.
Nceda nceda! Ukuba loo mveliso iya kubacaphukisa kakhulu isiqhekeza, i-oven ne-itch ivela, uze uhlambe phambi kwexesha elikhethiweyo.
Mask ngeoli ye-castor kunye nesonka se-rye ukuze ukhanyise iinwele
ioli ye-castor - 2 tsp.
ukumnika kwe-nettle-2 tbsp. l.
amanzi abilayo - 100 ml
I-nettle ye-brew ngamanzi abilayo amaninzi, makhele i-brew imizuzu engama-10 kwaye umxube umhluzi.
Thele isonka ngamanzi abilayo.
Gcoba isonka esityebileyo ngemfoloko uze unciphise umbane ongafunekiyo.
Hlanganisa ukunyuswa kwamanzi, ioli kunye ne-yolk kwi-crumb. Gxininisa zonke izithako.
Faka isicelo semask phezu kobude obude bee-curls uze ushiye umveliso iyure phantsi kwe-polyethylene.
Emva kokuhlamba iinwele eziliqela ngamanzi ashushu kunye ne-shampoo.
Umzobo we-Yoghurt weepaya kunye neenwele ze-kiwi
Yintoni enokuyenza ngeenwele ezingaqhelekanga? Iingcebiso zomculi wezinwele
Masks ukukhanyisa iinwele ekhaya
Indlela yokupheka ikhekhe ye-pancake: zokupheka eziphambili zokupheka
I-pizza kwi-microwave ngaphandle kwesonka
Iinyawo ezinqabileyo zivumba elimnandi
Indlela yokuchonga uhlobo lweqela legazi?
I-Apple-onion casserole kwi-squash
Xoxa kwiMango kunye ne-chinan